के दैनिक प्याज खाँदा यौन शक्ति बढ्छ ?
एजेन्सी / प्याजको सेवन गर्न तपाई कति रुचाउनु हुन्छ ? वा सेवनमा धेरै भएको त छैन् ? वा त्यसको बास्ना मन पर्दैन रु वा सेवन गर्न उचित मान्नु हुन्न ? तर प्याजका धेरै उपयुक्तता मध्य एक हो यौन क्षेत्रमा बृद्धि। प्याजले केवल खानालाई मात्र �
नयाँ अनुसन्धानः युवतीले किन रोज्छन् पाका पार्टनर ?
एजेन्सी / सबै उमेर समूहका पुरुषको रोजाइमा २०&ndash;२५ वर्षे उमेरका युवती पर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। फिनल्याण्डमा १८ देखि ४९ वर्ष उमेरका मानिसहरुमा गरिएको अध्ययनले २०&ndash;२५ वर्षे उमेरकी युवतीप्रति पुरुषहरु सबैभन्दा बढि आकष
काठमाण्डौ / आमा बन्नु महिलाका लागि खुसीको कुरा हो। गर्भावस्थामा महिलाहरूले शरीरमा थुप्रै परिवर्तनको अनुभूति गरेका हुन्छन्। गर्भावस्थाको समयमा देखिने यस्ता परिवर्तनबारे जानकारी नहुँदा उनीहरूमा डरसमेत पैदा हुने गरेको छ। गर�
बीबीसी / ब्राजिलले किशोरकिशोरीलाई यौन सम्पर्क विवाहपछिको लागि जोगाएर राख्न आग्रह गरेको छ। किशोरावस्थामा गर्भधारणको उच्च दरलाई कम गर्न सरकारले त्यस्तो आग्रह गरेको हो। महिला, परिवार तथा मानवअधिकार मन्त्री दमारेस एल्भिसले ल्�
एजेन्सी / कालो छालालाई साधारणतया राम्रो मानिँदैन। बजारमा कालोपना हटाउनका लागि हज्जारौं उत्पादन छन् तर तपाईंमध्ये धेरैलाई कालो छालाले स्वास्थ्यलाई पुर्याउने फाइदाबारे थाहा छैन होला। कालो छालामा पिगमेन्ट मेलानिनको मात्रा ध�
बिहेपछी महिलाको हिप बढ्नुको यस्तो छ कारण
एजेन्सी / सामान्य त हाम्रो समाजले पुरुष र महिलाबीच हुने बैवाहिक सम्बन्ध पछि मात्रै शारिरीक रुपमा परिवर्तन हुने तथ्य स्विकार गर्छ। तर कतिपय महिला र पूरुषहरु हर्मोन र वंशाणुगत गूणको कारण पनि शारिरीक रुपमा परिवर्तन हुने गर्दछन्�
यी हुन स्तन क्यान्सरका लक्षणहरु
काठमाण्डौ / मानव शरीरमा रहेका कोषहरूको वृद्धि र विभाजन शरीरको आवश्यकताअनुसार हुन्छ। तर, कहिलेकाहीँ स्तनमा अनावश्यक रूपमा कोष वृद्धि हुन थाल्छ। यस्तो हुँदा क्यान्सरको जोखिम हुन्छ। कोषमा आउने अनावश्यक परिवर्तनका कारण स्तनमा �
सम्भोग अघि महिलाले पुरुषसँग राख्छन यस्ता अपेक्षा
काठमाडौं / यौन सम्बन्ध भनेको दुई महिला पुरुषबीचको प्राकृतिक आकर्षण पनि हो। तर यौन सम्बन्ध राख्दा महिला र पुरुषको मनमा कस्तो भाव आउँला भन्ने कौतुहलता भने अधिकांशमा हुन्छ। यस विषयमा कयौं अध्ययन र लेख रचना समेत प्रकाशीत भएका छन।
गर्भनिरोधक पिल्स कति सुरक्षित ?
एजेन्सी / विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)का अनुसार विश्वभर १० करोडभन्दा धेरै महिला गर्भनिरोधक चक्की (पिल्स) सेवन गर्छन। सन् १९६० को दशकमा गर्भनिरोधक पिल्सको सुरुवात भएदेखि नै यसको प्रयोग गर्दा हुने फरक फरक नकारात्मक प्रभाव
एजेन्सी / दुव्लो भएका युवा युवती विवाह पछि मोटाएका हामीले देखेका छौं। अझ साथी भाईहरुबीच त बिहेपछि त मोटाइस् नी भन्ने प्रतिक्रिया दिने गरिएको सुनिन्छ। विवाहपछि किन मोटाउछन् त पातला मानिस यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। फेमिली सिस�
ओंठबाटै थाहा हुन सक्छ महिलाको गोप्य यौन व्यवहार
एजेन्सी / ओंठलाई महिला सौन्दर्यको प्रतीक पनि मान्ने गरिन्छ। अधिकांश महिलाहरु आफ्नो ओंठ प्रति निकै सजक र सतर्क रहँदै आएका पाइन्छन्। ओंठ खाली सौन्दर्यको खास पहिचान मात्र रहेन। ओंठले महिलाको सौन्दर्यसँगै उनीहरुको यौन व्यवहार व�
यी ५ महिलासंग भुलेर पनि नराख्नुस सम्बन्ध !
एजेन्सी / पुरुषहरु स्त्रीहरुसँग सम्बन्ध राख्न लालायित हुन्छन्। विवाहित र अविवाहित दुवै खाले पुरुषमा महिलाहरुको निकट हुने चाहाना उत्तिकै हुन्छ। तर सबै महिलासँग पुरुषले सम्बन्ध राख्नु उचित हुँदैन। यहाँ पुरुषले निकट संबन्ध रा
एजेन्सी / पुरुषहरूलाई जाडोमा यौन सम्पर्क राख्ने चाहना बढी हुन्छ। जाडो याममा दिन छोटो र रात लामो हुन्छ। रात लामो र जाडो हुने भएकाले निद्रा प्यारो लागे पनि चाँडै सुत्दा बीचैमा बिउँझिने हुन्छ। त्यसमाथि जाडोका कारण गुँडुल्किएर बस�
एजेन्सी / कोरोनाभाइरसको प्रकोपले चीनमा महामारीको रुप लिएपछि विश्वभरका स्वास्थ्य अधिकारीमा यसको चिन्ता बढेका छ। विश्वभरका आम मानिसमा यो भाइरसबारे अज्ञानता, चिन्ता देखिन्छ। चीनमा कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण मङ्गलबार मर्न�
काठमाण्डौ / आफूले शारीरिक सम्पर्क राखेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि एक दम्पत्तीले संसार त्यागेका छन्। भारतको मध्येप्रदेशको देवासमा एक दम्पत्तीले आत्महत्या गरेका छन्। निजी क्षणको भिडियो भाइरल भएपछि दम्पतीले आत्महत्या गरेको प्�